विचार/विश्लेषण Archives » Page2of3» Nepal Europe News
Home > विचार/विश्लेषण (Page 2)
NepalEurop July 10, 2016 खेलकुद, विचार/विश्लेषण	0
देव राज, २६ असार । युरोप मात्रको के कुरा, सिङ्गो विश्वकै ध्यान अहिले युरोकपले खिचेको छ । फ्रान्स मा जति चर्चित खेला डि छन् तेतिनै पोर्तूगल मा भने छैनन तर विश्व को आँखा ऐले रोनाल्डो तिर पनि छ । रोनल्डो बाहेक पोर्तूगल का नानी राम्रै खेलाडि मनिन्छन् भने रक्क्षा पंतिमा पेपे
NepalEurop June 24, 2016 Feature News, विचार/विश्लेषण	0
सूर्यराज आचार्य यस वर्षको एसएलसीमा ग्रेड प्रणाली अपनाइयो। भर्खरै रिजल्ट भयो। एसएलसी पछि के विषय पढ्ने भनेर उत्तीर्ण विद्यार्थी र तिनका आभिभावकले अब निधो गर्नुपर्ने होला। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले कुल र विषयगत ग्रेड अंकका आधारमा विद्यार्थीले कुन विषय पढ्न पाउने या नपाउने बारेमा मापदण्ड नै तोकेको छ। जस्तो गणित, विज्ञान
NepalEurop June 5, 2016 June 6, 2016 विचार/विश्लेषण	0
डा. माधवप्रसाद कोइराला पृथ्वीमा रहेका हरेक प्राणीलाई चाहिने निःशुल्क वा सशुल्क चिजमध्ये पिउनलाई पानी, सास फेर्न हावा, खानलाई खाद्य र तापका लागि सूर्यको किरण प्रमुख हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा आजभोलि अनियन्त्रित सहरीकरणका कारणले दैनिक जीवनमा नियन्त्रण पैदा भएको छ । पिउने पानीको उपत्यकाभरि हाहाकार भएको छ । करिब २५ वर्ष अगाडिदेखि
Ishwor Bhandari April 7, 2016 विचार/विश्लेषण	0
भनिन्छ लोकतन्त्रमा न्याय र समानता सँगसँगै आएनन् भने त्यो लोकतन्त्र केवल अराजक भीडमा सिमित हुनेछ । नेपालका पछिल्ला केही वर्ष यताका माउ राजनीतिक गतिविधिका घटनाहरूलाई सूक्ष्म तवरले विश्लेषण गरेर हेर्दा अघिकांश बुद्धिजीवी र जनताहरू निराश भएको पाउँछौं । हुन त आसावादी भएर सोच्ने हो भने अर्कोतर्फबाट यसो पनि भन्न सकिन्छ
Ishwor Bhandari March 21, 2016 March 21, 2016 प्रवास, विचार/विश्लेषण	0
विदेशमा आफ्नो पेशा ब्याबसाय गर्ने गैर आवासिय नेपालीहरुलाई हामी नेपालमा बस्ने नेपालीको तर्फबाट यो पङ्तिकार सलाम गर्दछ । मातृभुमिलाई संकट पर्दा आफ्ना पेशा ब्यबसायलाई धरापमा राखेर चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यलय अगाडि भएका प्रदर्शनमा होस् वा अमेरिका अथवा बेलायतमा, चाहे क्यनडामा वा आयरल्यण्डमा वा नर्वेमा, चाहे जर्मनीमा वा जापानमा । नेपाल
प्रधानमन्त्री ओलि ज्यु आपूर्ति मन्त्रिसंगै गए के हुन्छ ?- हरि धिताल
NepalEurop March 17, 2016 अर्थ/व्यापार/पर्यटन, विचार/विश्लेषण	0
सम्माननिय प्रधानमन्त्री ओलि ज्यु । आसान्न चीन भ्रमण मा तपाई र सरकार को के कस्तो तयारी छ ? नेपाल ले धेरै महत्त्वपूर्ण सन्धि र सम्झौता हरु चीन संग गर्दैछ भनेर तपाइँ का जागिर दार पत्रकार हरु बाट बारम्बार छापा हरु मा आयको छन ।हिजो राती सम्म आपूर्ति मन्त्री र उर्जा मन्त्री
सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या र संगठन पुनर्निर्माणको दायित्व
Ishwor Bhandari February 26, 2016 February 26, 2016 विचार/विश्लेषण	0
लोकतन्त्रमा फस्टाउन नसक्ने हुँदा हरेक अतिवादले पहिलो प्रहार लोकतन्त्रमाथि नै गर्छ । संविधान निर्माण र त्यसको प्रतिक्रियामा विभिन्न गतिरोधको विशिष्ट परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशन हुँदै छ । चार–चार निरंकुशताविरुद्ध झन्डै ७० वर्ष लामो संघर्ष गरेको हाम्रो पार्टीले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? पार्टीलाई अझ समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन पार्टीले के गर्नुपर्छ ?
जेलिएको सम्बन्धका बाध्यता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ दिल्ली तीर्थयात्रा सुरू हुनुअगावै सम्भाव्य प्रतिफलको लेखाजोखा हुन थालिसकेको थियो। उनी फर्किएपछि प्रसादको आशमा बसेकाहरूले उनको पोकोपन्तुरोको खोतलखातल गर्नु स्वाभाविक हो। अरू केही नभए पनि प्रमको बाकसबाट खुद्रा मालतालका साथै केही सान्त्वना एवं पर्याप्त चेतावनीका सन्देश भेटाइन सक्छन्। भ्रमणपछि संयुक्त वक्तव्यमा सहमत हुन नसक्नु त
जंगबहादुरः सुन्दरीहरुका भोगी नेता
Ishwor Bhandari January 30, 2016 January 30, 2016 विचार/विश्लेषण, विविध	0
इतिहास पढ्दा जंगबहादुरलाई एक बहादुर, शक्तिशालि, दन्त्यकथाको नायक जस्तै बुद्धि र बलमा निपूर्ण व्यक्तित्वको रुपमा लिइन्छ । तर, यी जंगबहादुर औंठाछाप नै थिए । यिनले अक्षर पनि चिन्न र आफनो नाम पनि राम्रोसँग लेख्न सक्तैनथे । हालसम्मको सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्न सौभाग्य पाएका जंगबहादुर राणाको जन्म बि सं १८७४ असार
कमाई थोरै हुने र मजदूरी गर्न जाने देशका एनआरएनको अबमुल्यन भयो
NepalEurop January 20, 2016 January 21, 2016 प्रवास, विचार/विश्लेषण	0
एन आर एनहरुको संस्था एन आर एन ए को विश्व महाधिवेशन गत अक्टुबर १४ देखि १७ मा सम्पन्न भएकोछ। यस विश्व सम्मेलनबाट नयाँ योजना र कार्यक्रमहरु लिएर नयाँ नेतृत्वको चयन भएकोछ। नेतृत्व चयनमा करिव १२ सय बिभिन्न देशहरुबाट आएका प्रतिनिधिहरुले जे जसरी आफ्नो मतहरु आफ्ना उमेदवारलाई आफ्नो अभिमत दिएर मतदान